Biraanuu Nagaa fi KKF: Warra Oromoodhaan Daldaluu Barbaadan! (Yaadannoo Koo Keessaa) – gamtaa site
Biraanuu Nagaa fi KKF: Warra Oromoodhaan Daldaluu Barbaadan! (Yaadannoo Koo Keessaa)
Qindoominni (CUD)n Filannoo bara 2005tiin magaalaa Finfinneetti guutummaatti mo’ate. Torbanuma sani koreen gidduu Qindoominaa (CUD) Biraanuu Naggaa (PHD) kantiibaa magaalaa Finfinnee godhee muude. Yeroo kana magaalaan guddittii Oromiyaa Finffinnee irraa gara Adaamaatti jijjiirame ture. Gafafiiin abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irraa qabus itti fufeera.
Yeroo kana Gazexaa The voice jedhamutu, torbanitti al takka dhimma Oromoo irratti xiyyeefattee maxxamftuu qabna turre. Anis gulaalaa olanaa The Voice waanan tureef “Qindoomni- CUDn yeroo magaalaa Finfinnee bulchu gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo akkamitti ilaala/ deebisa?” gaaffii jettuuf deebii argachuufan gara kantiibaa Biraannuu Naggaatti bilbile. Gaaffii fi deebii isa faana adeemsisuu akkan barbaadu irra deddebi’ee isaaf ibse. Yeroo hedduu erga na dhamaasee booda guyyaa tokko gaaffii fi deebiif taasisuuf Boolee, gamoo waajjirri dhunfaa isaa keessatti argamu, keessatti wal geenye.
“Maal na gaafachuu barbaadde?” jedhee na gaafate, marcuma naannoftuu irra duddaan galee ciisee.
Anis heera mootummaa qollisaa cuquliisaa harkatti qabadhee jiru banee keeyyata 49 baaseen “keeyyati 49 fayyidaan addaa Oromoon Finfinnee irraa qabu ni kabajamaaf jedha. Qindoominni fayyida Oromoo kana akkamitti ilaalaa? magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinneetti akka deebi’uufis Oromoon gaafachaa jira, ejjennoon keessan maal???” gaaffii jedhun dhiyeesseef.
Biraanuu Naggaas akkuma duddaan galee ciisutti asii fi achi munyuuqee “fayyidaa addaa maal maal kan ati naan jettu kun naaf hin galu. Garuu magaalaan guddittiin Oromiyaa Finfinneetti deebi’ee, wajjiraaleen Oromiyaa fi hojjettoonni isaanii yoo Finfinneetti deebi’an hin morminu. Sababi isaas magaalaa Finfinnee kan bulchu Qindoomina waan ta’eef tokkoon tokkoon wajjiraalee Oromiyaafi hojjetoota isaa irraa gibira (tax) funaanna. Kanaaf bulchiinsa Qindoominaaf deggersa dabalataa ta’u jechuu dha!! Kan naaf galu kanuma!” Jedhee naa deebise.
Anis akkuma inni jedhettan gaazexa The Voice irratti maxxanse. Kayyoon jaras Oromoof caalmaatti ifa tahe.
Habashoonni akka Biraanuu Naggaa fi fakkeettii isaa kan isaan Oromoo barbaadan ittiin daldaluuf. Harka isaatiin ibidda qabachuuf. Barri sun garuu kuteera. Gadaan kan Oromoo ti. Yoo Oromootu haxxoomee isaanitti fayyadama tahee malee tasa fallaa ta’uu hin danda’u! Oromoon gariin garamummaadhaan tumsa haqaa warra kanaa wajjiin tolfachuuf guyyuu mannaga. Tumsi qabsoo garuu hawwiin hin taatu. Oromoo kan baasu qabsoo ifi irratti hirkate cimsee itti fufuudha. Tumsi yoo barbaachise abbaan ofiif jedhee Oromootti haa dhufu! Kanuma!
← “African Year of Human Rights”
Habtamu Dugo:- Will Expressing Concern Prevent State-Led Mass Murder in Oromia, Ethiopia? →